Madaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay waxgaradka gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay waxgaradka gobolka Mudug
November 11, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo kulan kula qaatay madaxtooyada Gaalkacyo waxgaradka gobolka Mudug. [Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo maanta oo Jimce ah gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa kulan la qaatay cuqaasha iyo nabadoonada Gaalkacyo.
Madaxweynaha iyo waxgaradka ayaa kulankooda diirada ku saaray dagaalka gobolka Mudug ee u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug.
Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waxgaradka uga mahadceshay sida ay markasta ugu howlanyihiin sidii loo qaboojin lahaa colaada gobolka Mudug.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland aysan cidna duulaan ku ahayn isla markaana ay kaalin weyn ka geysan doonto sidii bulshada magaalada Gaalkacyo ay nabad-gelyo iyo deris wanaag ugu wada noolaan lahaayeen.
Madaxweynaha ayaa la filayaa in uu Gaalkacyo kula kulmo madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed si ay uga wada-hadlaan soo afjarida dagaalka Gaalkacyo oo ay ku dhinteen tobonaan dad ah.